Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Idaacadaha Shabakadaha
Mazikeen OÜ (“Annaga”, “annaga”, ama “kuweena”) waxay ku shaqeeyaan websaydhkan iyo barxadda ("Adeegga"). Boggan wuxuu kugu wargelinayaa siyaasadahayaga ku saabsan ururinta, isticmaalka, iyo bixinta macluumaadka shakhsiyeed markaad adeegsanayso Adeeggayada iyo xulashooyinka aad la xiriirtay xogtaas.
Waxaan u isticmaalnaa xogtaada si aan u bixinno una hagaajino adeegga. Adeegsiga adoo adeegsanaya, waxaad ogolaatay ururinta iyo adeegsiga macluumaadka si waafaqsan qaanuunkaan.
Xog noocee ah ayaa la shaqeeyaa?
Intaad adeegsaneysid adeegeena, waxaan kaa codsaneynaa inaad na siiso macluumaad shaqsiyeed la aqoonsan karo oo loo isticmaali karo in lagula xiriiro ama lagugu aqoonsado ("Xogta Shakhsiyeed"). Macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn:
Waxaan u isticmaali karnaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed inaan kula soo xiriirno joornaalada, suuq-geynta ama agabyada xayeysiinta ah iyo macluumaadka kale ee adiga xiisaha kuu leh. Waad ka bixi kartaa inaad naga hesho mid, ama dhammaan, isgaarsiintaan annaga oo raacaya xiriirka liis-ka-saarista ama tilmaamaha lagu bixiyay emayl kasta oo aan dirno.
Waxaan ururinaa macluumaadka sida adeegga loo helo loona isticmaalo ("Xogta Isticmaalka"). Xogtan Isticmaalka waxaa ku jiri kara macluumaad sida cinwaanka borotokoolka Internetka kombiyuutarkaaga (tusaale IP address), nooca biraawsarka, nooca biraawsarka, bogagga adeegeena aad booqatay, waqtiga iyo taariikhda booqashadaada, waqtiga ku qaatay boggagaas, mid gaar ah qalabka aqoonsiga iyo xogta kale ee cudurka.
Raadinta Xogta Kukiyada
Waxaan u adeegsanaa cookies-ka iyo tikniyoolajiyada la midka ah ee la-socoshada si aan ula socono waxqabadka adeeggayaga oo aan u hayno macluumaad gaar ah. Kukiyada waa faylal ay ku jiraan qaddar yar oo xog ah oo ay ku jiri karaan aqoonsi u gaar ah oo aan la aqoonsan. Kukiyada waxaa loo diraa biraawsarkaaga oo laga soo diraa degel waxaana lagu keydiyaa qalabkaaga. Teknoolojiyada la socoshada sidoo kale waxaa loo isticmaalay inay yihiin shuruudo, sumado, iyo qoraallo si loo ururiyo loona la socdo macluumaadka loona horumariyo loona falanqeeyo adeeggayaga. Waad ku amri kartaa biraawsarkaaga inuu diido dhammaan cookies-ka ama inuu tilmaamo marka cookie loo dirayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aqbalin cookies, ma awoodi doontid inaad isticmaasho qaybo ka mid ah adeeggayaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cookies, arag siyaasadda cookie.
Ujeedada laga leeyahay maxaa loo ururiyaa xogta?
Mazikeen OÜ waxay u isticmaashaa xog aruurinta ujeedooyin kala duwan:
Si loo bixiyo loona ilaaliyo adeegeena
In laguu oggolaado inaad kaqeybqaadato astaamaha is-dhexgalka ee adeegeena markaad doorato inaad sidaas sameyso
Si aad u bixiso taageero macaamiisha
Si loo ururiyo falanqeyn ama macluumaad qiimo leh si aan u horumarino adeegeena
Si loola socdo adeegsiga adeegeena
Si aan kuu siino warar, dalabyo gaar ah iyo macluumaad guud oo ku saabsan badeecadaha kale, adeegyada iyo munaasabadaha aan soo bandhigno oo la mid ah kuwii aad horay u soo iibsatay ama wax ka weydiisay haddii aad ka door bidday inaadan helin macluumaadkaas oo keliya.
Waxaan hayn doonnaa Xogtaada Shakhsi ahaaneed oo keliya illaa inta lagama maarmaanka u ah ujeedooyinka lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waan hayn doonnaa oo adeegsan doonnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed illaa inta lagama maarmaanka u ah u hoggaansamida waajibaadkayaga sharciga ah (tusaale ahaan, haddii nalooga baahan yahay inaan xafidno xogtaada si aan ugu hoggaansano sharciyada khuseeya), xallino khilaafaadka, una dhaqan galino heshiisyadayada iyo siyaasadahayaga sharciga ah.
Mazikeen OÜ sidoo kale wuxuu hayn doonaa Macluumaadka Isticmaalka ujeeddooyin falanqayn gudaha ah. Xogta Isticmaalka guud ahaan waa la hayaa muddo gaaban, marka laga reebo marka xogtan loo isticmaalo in lagu xoojiyo amniga ama lagu hagaajiyo howlaha Adeeggeena, ama aan sharci ahaan waajib ku nahay inaan sii hayno xogtan muddo dheer.
Waxaan qaadi doonaa talaabooyin kasta oo macquul ah si loo hubiyo in xogtaada loola dhaqmo si aamin ah oo waafaqsan siyaasadan asturnaanta. Waxaa naga go'an inaan ka ilaalino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed adeegsiga ama shaacinta aan la oggolaan.
Waxaan u adeegsannaa tiro xul ah bixiyeyaasha adeegga dibadda ee lagu kalsoon yahay falanqaynta xogta farsamada qaarkood, farsamaynta iyo / ama bixinta kaydinta. Adeeg bixiyayaashan si taxaddar leh ayaa loo xushay waxayna la kulmaan ilaalinta xogta sare iyo heerarka amniga. Kaliya waxaan la wadaagnaa iyaga macluumaadka looga baahan yahay adeegyada.
If Mazikeen OÜ ku lug leeyahay midowga, iibsiga ama iibinta hantida, Waxaa laga yaabaa in macluumaadkaaga shakhsiyadeed la wareejiyo. Waxaan bixin doonnaa ogeysiis kahor inta macluumaadkaaga shakhsiga ah aan loo wareejin oo aan ku xirnaan doono Nidaamka Khaaska ah ee Gaarka ah.
Duruufaha qaar, Mazikeen OÜ waxaa laga yaabaa in loo baahdo in la shaaciyo macluumaadkaaga shaqsiyeed haddii loo baahdo in sidaas lagu sameeyo sharciga ama iyada oo laga jawaabayo codsiyada ansax ah ee mas'uuliyiinta dowladda (tusaale ahaan maxkamad ama hay'ad dowladeed).
Mazikeen OÜ waxa laga yaabaa inay siidaayaan Xogtaada shakhsiga ah aaminaadda suuban ee aaminka ah ee ficilkan oo kale ay lama huraan u tahay
In la ilaaliyo oo la difaaco xuquuqda ama hantida Mazikeen OÜ
Waxaad xaq u leedahay in laguu ogeysiiyo Xogta Shakhsiyeed ee ay shaqeyso Mazikeen OÜ, xaquuqda saxitaanka / saxida, tirtirida iyo xadidaada howsha. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad hesho qaab habeysan, caadi ah oo mashiin-akhrin kara ah oo ah Xogta Shakhsiyeed ee aad na siisay.
Waxaan kaliya kugu aqoonsan karnaa cinwaanka emaylkaaga waxaanan kaliya u hogaansami karnaa codsigaaga oo aan bixin karnaa macluumaadka haddii aan hayno Macluumaadka Shakhsiyeed ee adiga kugu saabsan adiga oo si toos ah noola soo xiriiray iyo / ama adoo adeegsanaya bartayada iyo / ama adeegga. Ma bixin karno, ma sixi karno ama kama tirtiri karno xog kasta oo aan ku kaydinno annaga oo ka wakiil ah isticmaaleyaashayada ama macaamiisheena.
Si aad u isticmaasho mid ka mid ah xuquuqaha lagu sheegay Siyaasaddan Qarsoonnimada iyo/ama haddii ay dhacdo su'aalo ama faallooyin la xidhiidha isticmaalka Xogta Shakhsi ahaaneed waxaad la xidhiidhi kartaa kooxdayada taageerada: info@network-radios.com.
Waxaad xaq u leedahay inaad ka laabato ogolaanshaha wakhti kasta, adigoon saameyn ku yeelan sharci ahaanta howsha la qabtay ka hor intaadan la noqon. Mar kasta oo aad ka laabato ogolaanshaha, waad qiraysaa oo aad aqbashaa inay tani saamayn taban ku yeelan karto tayada goobta iyo / ama adeegyada. Waad sii raacsan tahay taas Mazikeen OÜ looma saari doono mas'uuliyadda qasaaro kasta iyo / ama waxyeelada Xogtaada Shakhsiyeed haddii aad doorato inaad ka noqoto ogolaanshaha.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad xaq u leedahay inaad dacwad uga gudbiso hay'adda ilaalinta xogta ee maamulkaaga.
Waxaan u shaqaaleynaa shirkadaha saddexaad iyo shakhsiyaadka si ay u fududeeyaan Adeeggeena ("Bixiyeyaasha Adeegga"), si ay u siiyaan Adeegga annaga oo matalaya, si ay u qabtaan adeegyo la xiriira Adeegga ama inay naga caawiyaan falanqaynta sida Adeeggeenna loo isticmaalo. Dhinacyadan saddexaad waxay marin u heli karaan Macluumaadkaaga Shakhsiyeed oo keliya inay ku fuliyaan shaqooyinkan annaga oo wakiil ka ah waxaana waajib ku ah inaysan shaaca ka qaadin ama u adeegsan ujeedo kale.
Waxaan u adeegsannaa Bixiyeyaasha Adeegga-saddexaad si aan ula socono oo aan u falanqeyno adeegsiga Adeeggeenna.
Google Analytics waa adeeg falanqeyn web ah oo ay bixiso Google Inc ("Google"). Google waxay u isticmaashaa Xogta la soo aruuriyay si ay ula socoto una baarto isticmaalka Website-kan, si ay uga diyaariso warbixinno ku saabsan howlaheeda isla markaana ula wadaagto adeegyada kale ee Google.
Raadinta Xayeysiinta Facebook Ads
Raadinta Xayeysiinta Facebook Ads waa adeeg falanqeyn ah oo ay bixiso Facebook, Inc. kaas oo isku xira xogta laga helo shabakadda xayeysiinta ee Facebook iyadoo la adeegsanayo ficillada lagu sameeyo Websaydhkan.
Mazikeen OÜ wuxuu adeegsadaa adeegyo dib-u-qiimeyn ah si uu kuugu xayeysiiyo websaydhada dhinac saddexaad marka aad booqato Adeeggayaga. Annaga iyo iibiyeyaashayada saddexaad waxay adeegsadaan kukiyada si aan ugu wargalinno, u hagaajinno una adeegno xayeysiisyo ku saleysan booqashooyinkiinnii hore ee Adeeggeena.
Dib-u-habeynta Google AdWords (Google Inc.)
Dib u habeynta AdWords waa adeeg dib u qiimeyn iyo bartilmaameed dabeecadeed oo ay bixiso Google Inc. kaas oo isku xira waxqabadka Websaydhkan iyo shabakadaha xayeysiinta ee Adwords iyo cookie Doubleclick ah.
Dib-u-iibinta Twitter (Twitter, Inc.)
Dib-u-habeynta Twitter waa adeeg dib-u-qiimeyn iyo beegsi hab-dhaqan oo ay bixiso Twitter, Inc. kaas oo isku xira waxqabadka Websaydhkan iyo shabakadda xayeysiinta ee Twitter.
Dhageystayaasha Macaamiisha Facebook (Facebook, Inc.)
Dhageystayaasha Macaamiisha ee Facebook waa adeeg dib-u-qiimeyn iyo beegsi hab-dhaqan oo ay bixiso Facebook, Inc. kaas oo isku xira waxqabadka Websaydhkan iyo shabakadda xayeysiinta ee Facebook.
Marti galinta iyo taageerida kaabayaasha dhaqaalaha
BlueHost waa adeeg martigelin ah oo ay bixiso Kooxda Caalamiga ah ee Endurance
Waxaan bixin karnaa alaabo lacag iyo / ama adeegyo ah Adeegga. Xaaladdaas, waxaan isticmaalnaa adeegyada saddexaad ee bixinta lacag bixinta (tusaale ahaan hawsha lacag bixinta).
Ma xafideyno ama soo qaadeyno faahfaahinta kaarkaaga lacag bixinta. Macluumaadkaas waxaa si toos ah loo siiyaa hawlgalada lacag bixinta dhinac saddexaad oo kuwaas oo isticmaalkooda macluumaadkaaga shakhsiyeed ay ku maamulaan Siyaasadooda Khaaska ah. Hawlaha bixiyeyaasha lacag bixinta waxay ku xiran yihiin shuruudaha ay bixiso PCI-DSS sida ay maamusho Golaha Ammaanka ee PCI, oo ah dadaal wadajir ah oo noocyo kala duwan ah sida Visa, Mastercard, American Express iyo Discover. Shuruudaha PCI-DSS waxay hubiyaan in si taxadar leh loo ilaaliyo macluumaadka lacag bixinta.
Hawlaha lacag bixinta ee aan la shaqeyno waa:
Stripe waa adeeg lacag bixin ah oo ay bixiso Stripe Inc.
PayPal waa adeeg lacag bixin ah oo ay bixiso PayPal Inc., kaas oo u oggolaanaya Users inay lacag ku bixiyaan internetka.
Isdhexgalka iyo taageerada macaamiisha
Wadahadalka Macaamiisha ee Facebook Messenger waa adeeg is dhexgal ah oo lala yeelanayo barta tooska loogu wada hadlo ee Facebook Messenger ee ay bixiso Facebook, Inc.
Maareynta keydka macluumaadka
Mailchimp waa maareynta cinwaanka emaylka iyo adeegga dirista farriinta ee ay bixiso Mailchimp.
Google reCAPTCHA waa adeegga ilaalinta SPAM ee ay bixiso shirkadda Google Inc.
Woocommerce waa nidaam jeeg bixin ah oo lagu maareeyo lacag bixinta iyo amar bixinta.
Gravatar waa adeeg muuqaal muuqaal ah oo ay bixiso shirkadda Automattic Inc. kaas oo u oggolaanaya Websaydhkan inuu ku daro waxyaabaha noocaan ah bogaggiisa.
YouTube waa adeeg muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah oo ay bixiso Google Inc. kaas oo u oggolaanaya Websaydhkan inuu ku daro waxyaabaha noocan ah bogaggiisa.
Fariimaha Bulshada ee Facebook
Badhanka Facebook Like iyo widget-yada bulshada ayaa ah adeegyo u oggolaanaya isdhexgalka shabakadda bulshada ee Facebook oo ay bixiso Facebook, Inc.
Google+ Widgets-ka Bulshada
Batoonka + +1 iyo aaladda bulshada loo adeegsado ayaa ah adeegyo u oggolaanaya la falgalka shabakadda bulshada ee Google+ ee ay bixiso shirkadda Google Inc.
Qalabka bulshada ee Twitter
Tilmaamaha Twitter-ka ee Twitter-ka iyo aaladda bulshada loo adeegsado ayaa ah adeegyo u oggolaanaya la-falgalka shabakadda bulshada ee Twitter oo ay bixiso Twitter, Inc.
LinkedIn Qalabka Bulshada
Badhanka wadaagida LinkedIn iyo aaladaha bulshada ayaa ah adeegyo u oggolaanaya la falgalka shabakadda bulshada ee LinkedIn ee ay bixiso LinkedIn.
Adeegayagu wuxuu ka koobnaan karaa xiriiriyeyaal bogag kale oo aan annagu ka hawlgelin. Haddii aad gujiso xiriirka dhinac saddexaad, waxaa lagugu hagaajin doonaa goobta qeybta saddexaad. Waxaan si adag kugula talineynaa inaad dib u eegto Nidaamka Asturnaanta ee degel kasta oo aad booqato. Ma xakamayn karno mana qaadanayno wax masuuliyad ah waxyaabaha ku jira, siyaasadaha asturnaanta ama dhaqamada bogagga ama adeegyada dhinac saddexaad.
Ma ogaanno in macluumaadka shakhsi ahaan loo aqoonsan karo qof ka yar da'da 13. Haddii aad tahay waalid ama ilaaliye oo aad ka warqabto in Caruurtaada ay na siiyeen macluumaadka shakhsiyeed, fadlan nala soo xiriir. Haddii aan ogaanno in aan soo uruurinnay macluumaadka shakhsiyeed ee carruurta aan ansixin ogalaanshaha waalidka, waxaan qaadnaa tallaabooyin aan kaga saarno macluumaadkaas ka yimid server-yadayada.
Waxaan cusbooneysiin karnaa Nidaamkeena Khaaska ah waqti ka waqti. Waxaan kugula socodsiin doonaa wixii isbeddel ah adoo ku dhejinaya boggan Siyaasadda cusub ee Asturnaanta. Waxaan kugula socodsiin doonnaa emayl iyo / ama ogeysiis caan ah oo ku saabsan adeeggayaga, kahor intaan isbeddelku noqon mid waxtar leh oo aan cusbooneysiinno "taariikhda wax ku oolka ah" ee sare ee Nidaamkan Asturnaanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad dib u eegis ku sameyso Siyaasaddan Khaaska ah xilliyo wixii isbeddel ah. Isbedelada lagu sameynayo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa wax ku ool ah marka lagu dhajiyo boggan.
Waxaad ku sameyn kartaa tan adigoo la xiriiraya kantaroolaha xogta (qofka ama hay'adda abaabushay ololaha aad ka qayb qaadatay). Waxa kale oo aad ka heli kartaa My Account si loo arko, wax looga beddelo iyo / ama loo tirtiro macluumaadkaaga shakhsiyeed.